လမ်းခွဲအစိတ်အပိုင်းများ, Smt ကြှေးမှေးအစိတ်အပိုင်းများ, တရုတ်အတွက် Panasonic ကကြှေးမှေးအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူ
ဖေါ်ပြချက်:လမ်းခွဲအစိတ်အပိုင်းများ,Smt ကြှေးမှေးအစိတ်အပိုင်းများ,Panasonic ကကြှေးမှေးအစိတ်အပိုင်းများ,Panasonic ကကြှေးမှေးများအတွက်အစိတ်အပိုင်းများ,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > လမ်းခွဲအစိတ်အပိုင်းများ
လမ်းခွဲအစိတ်အပိုင်းများ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, လမ်းခွဲအစိတ်အပိုင်းများ, Smt ကြှေးမှေးအစိတ်အပိုင်းများ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Panasonic ကကြှေးမှေးအစိတ်အပိုင်းများ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N210154808AB ဖြီး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N210081355AB ပန်းကန်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1NJAA00 လမ်းညွှန်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N210001891AA ကိုနှိပျ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1NSAA00 လီဗာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1P0AA00 လီဗာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1PQ7A02 ဂီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N210001893AA လမ်းညွှန်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N610001303AA တိပ်-လမ်းညွှန် (Sense)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1MYAA00 ပန်းကန်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N610072586AB ပန်းကန်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1Q0PA00 ပန်းကန်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1Q0LA00 PIN ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1LZAA00 PIN ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1KKBA00 ဂီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N510004561AA cable  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1PT7A00 ကိုနှိပျ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N610007304AA DC က MOTOR 2.4V  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1N1AA00 လီဗာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1N3AA00 မျက်နှာဖုံး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1PT9A01 လမ်းညွှန်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N210154808AB ဖြီး
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N210154808AB ဖြီး အပိုင်းအရေအတွက်: N210154808AB item အမည်: ဖြီး အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N210081355AB ပန်းကန်
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N210081355AB ပန်းကန် အပိုင်းအရေအတွက်: N210081355AB item အမည်: ပန်းကန် အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1NJAA00 လမ်းညွှန်
Panasonic က CM / NPM Machine ကိုများအတွက် KXFA1NJAA00 လမ်းညွှန်သံမဏိ အပိုင်းအရေအတွက်: KXFA1NJAA00 item အမည်: လမ်းညွှန် အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်,...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N210001891AA ကိုနှိပျ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N210001891AA N210001891AB ကိုနှိပျ အပိုင်းအရေအတွက်: N210001891AA N210001891AB item အမည်: ကိုကလစ်နှိပ်ပါ အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602,...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1NSAA00 လီဗာ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1NSAA00 လီဗာ အပိုင်းအရေအတွက်: KXFA1NSAA00 item အမည်: လီဗာ အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1P0AA00 လီဗာ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1P0AA00 လီဗာ အပိုင်းအရေအတွက်: KXFA1P0AA00 item အမည်: လီဗာ အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602,...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1PQ7A02 ဂီယာ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1PQ7A02 ဂီယာ အပိုင်းအရေအတွက်: KXFA1PQ7A02 item အမည်: ဂီယာ အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N210001893AA လမ်းညွှန်
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N210001893AA လမ်းညွှန် အပိုင်းအရေအတွက်: N210001893AA item အမည်: လမ်းညွှန် အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N610001303AA တိပ်-လမ်းညွှန် (Sense)
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N610001303AA တိပ်-လမ်းညွှန် (Sense) အပိုင်းအရေအတွက်: N610001303AA item အမည်: တိပ်-လမ်းညွှန် (Sense) အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602,...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1MYAA00 ပန်းကန်
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1MYAA00 ပန်းကန် အပိုင်းအရေအတွက်: N210124272AA KXFA1MYAA00 item အမည်: ပန်းကန် အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N610072586AB ပန်းကန်
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N610072586AB ပန်းကန် အပိုင်းအရေအတွက်: N610072586AB item အမည်: ပန်းကန် အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602,...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1Q0PA00 ပန်းကန်
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1Q0PA00 ပန်းကန် အပိုင်းအရေအတွက်: KXFA1Q0PA00 item အမည်: ပန်းကန် အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1Q0LA00 PIN ကို
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1Q0LA00 PIN ကို အပိုင်းအရေအတွက်: KXFA1Q0LA00 item အမည်: PIN ကို အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1LZAA00 PIN ကို
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1LZAA00 PIN ကို အပိုင်းအရေအတွက်: KXFA1LZAA00 item အမည်: PIN ကို အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1KKBA00 ဂီယာ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1KKBA00 ဂီယာ အပိုင်းအရေအတွက်: KXFA1KKBA00 item အမည်: ဂီယာ အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N510004561AA cable
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N510004561AA cable အပိုင်းအရေအတွက်: N510004561AA item အမည်: cable အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1PT7A00 ကိုနှိပျ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1PT7A00 ကိုနှိပျ အပိုင်းအရေအတွက်: KXFA1PT7A00 item အမည်: ကိုကလစ်နှိပ်ပါ အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N610007304AA DC က MOTOR 2.4V
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N610007304AA DC က MOTOR 2.4V အပိုင်းအရေအတွက်: N610007304AA item အမည်: MOTOR အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1N1AA00 လီဗာ
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1N1AA00 လီဗာ အပိုင်းအရေအတွက်: KXFA1N1AA00 N210029789AA item အမည်: လီဗာ အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1N3AA00 မျက်နှာဖုံး
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1N3AA00 မျက်နှာဖုံး အပိုင်းအရေအတွက်: KXFA1N3AA00 item အမည်: မျက်နှာဖုံး အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1PT9A01 လမ်းညွှန်
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် KXFA1PT9A01 လမ်းညွှန် အပိုင်းအရေအတွက်: KXFA1PT9A01 item အမည်: လမ်းညွှန် အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith...
တရုတ်နိုင်ငံ လမ်းခွဲအစိတ်အပိုင်းများ ပေးသွင်း
တူညီသောအမှတ်တံဆိပ်စက် 1. ကွဲပြားခြားနားသော Smt ကွဲပြားခြားနားသော Smt လမ်းခွဲနှင့်အတူစက်, ဒါပေမယ့်မတူညီတဲ့ပုံစံ Panasonic လမ်းခွဲကဲ့သို့တူညီသောလမ်းခွဲကိုသုံးနိုင်သည်။
အစိတ်အပိုင်းများ၏အရွယ်အစားနှင့်အမျိုးအစားများအပေါ် 2. အခြေစိုက်စခန်း, Smt လမ်းခွဲသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်: Tube လမ်းခွဲ; ဗန်းကြှေးမှေး; bulk ကြှေးမှေး။
အဆိုပါလမ်းခွဲအခြေအနေပေါ်တွင် 3. အခြေစိုက်စခန်းလည်းလေးအမျိုးအစားများကိုခွဲခြားနိုင် Smt လမ်းခွဲ: မူရင်းသစ်ကို Smt လမ်းခွဲအစိတ်အပိုင်းများ, မူရင်း Smt လမ်းခွဲအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြု, အတုယူ / သစ်ကို Smt လမ်းခွဲအစိတ်အပိုင်းများကို copy, အတုယူ / အသုံး Smt လမ်းခွဲအစိတ်အပိုင်းများကိုကော်ပီကူး,
မူရင်းလမ်းခွဲမူရင်း Smt စက်ထုတ်လုပ်မှုထုတ်လုပ်သူများကဖန်ဆင်းသည်။ ကြောင့် Smt လမ်းခွဲများအတွက်ကြီးမားသောဝယ်လိုအားရန်, လက်ရှိအများအပြားသစ်ကိုလမ်းခွဲအစိတ်အပိုင်းများကို copy ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းခွဲအရည်အသွေးကိုလည်းအလွန်ကြီးမြတ်နှင့်သင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်လင့်ပါ!
လမ်းခွဲအစိတ်အပိုင်းများ Smt ကြှေးမှေးအစိတ်အပိုင်းများ Panasonic ကကြှေးမှေးအစိတ်အပိုင်းများ Panasonic ကကြှေးမှေးများအတွက်အစိတ်အပိုင်းများ Panasonic ကလမ်းခွဲအစိတ်အပိုင်းများ